Amanyathelo onokuwathatha ukumisa inkqubo yokuchazwa kwangaphambili kwe-NJ & NY yeZindlu kunye nokuThengisa, ukuKhuselwa kweNdawo kunye nabaGcini beRhafu
ikhaya / Blog / Ukuchithwa / Amanyathelo ongawathatha ukumisa inkqubo yokubonisa
Ukuba ufumene isaziso sokusilela emva kokuphosa intlawulo yokuhlawulwa kwemali-mboleko, oko akuthethi ukuba indlu yakho iya kuchazwa kwangaphambili. Usenako ukuthatha amanyathelo ambalwa okonqena ukuze uyeke inkqubo yokubonisa.
Xa uphosa ezimbalwa zentlawulo yakho yobambiso, umbolekisi wakho uyakufaka ifayile yeSaziso sokuNgagqibeki. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba konke kulahlekile. Unokufumana uncedo kwiindlela ezintlanu onokuthi uzisebenzise ukumisa inkqubo yokubonisa. Ezi zicwangciso zidweliswe apha ngezantsi:
Ukudalwa kwasemsebenzini -Ukuba indlu yakho ayicwangciswanga kwindali okwangoku, ungasebenza kunye nombolekisi wakho ukuba ubuye ngomkhondo ngentlawulo yakho yokubambisa. Ababolekisi abaninzi bazimisele ukusebenzisana kwaye basebenze isicwangciso sentlawulo esikufaneleyo kunye nabo. Oku kuyakukhusela ikhaya lakho ekubonakaleni.
Ukuthengisa kufutshane -Ukuba umbolekisi sele egcwalise iSaziso sokuNgagqibeki, ekwabizwa ngokuba yi-NOD, indlu yakho iya kwakhelwa ifandesi. Nangona kunjalo, ukuba ufumana umnikelo ngaphambi kokuba i-auction ihlelwe, umbolekisi wakho kufuneka awuqwalasele loo mnikelo. Nanini na xa indlu ivezwe, umbolekisi akanayo enye indlela ngaphandle kokuzama ukuyithengisa kwakhona kamva. Kodwa ukuba umnikelo sele wenziwe, kwaye kufanelekile, umbolekisi uya konga ixesha kunye nomzamo wabo kwaye uya kuqhubela phambili nokunikezelwa kwintengiso. Oku kubizwa ngokuba kuthengiso olufutshane kwaye kuyabasindisa kwingxaki yokufumana umthengi emarikeni.
Ke, ukuba ushiya ngasemva kwintlawulo yakho yokubambisa kwaye ikhaya lakho likulevenkile, kuya kufuneka uqhubeke nokufuna ngolunya umthengi wakhe. Oku kuyakuvumela ukuba ugcine ikhaya lakho nokuba kukwiimarike kwaye inkqubo yokubonisa kwangaphambili sele iqalile.
Ifayile yokuNgabinamali -Ukuba ukhetha ifayile ukubhengezwa, inkqubo yokuxelwa kwangaphambili iya kumiswa ifile kumkhondo wayo. Nje ukuba kubhengezwe ukubhengezwa njengongenamali, abaqokeleli bamatyala kunye nababolekisi bemali mboleko bayathintelwa ekuqhubeni nayiphi na imisebenzi yokuqokelela. Nje ukuba umbolekisi aqaphele ukubhengezwa, inkqubo yokuxelwa kwangaphambili iya kumiswa ngoko nangoko.
Olona luvo luphezulu lokufayilisha ngenxa yokuchacha kuba kukunika ixesha elingakumbi lokubuyela ethubeni. Ukuchacha kukuthengela ixesha elininzi onokulisebenzisa ukukhangela umsebenzi ongcono, kunye nokubuyisela imali yakho ekhondweni. Okwangoku, umntu obambele imali ebambisene phakathi kwakho kunye nababolekisi. Emva kokugcwalisela ukubhengezwa njengongenamali, inkampani yakho ebolekayo kunye nambambiso iya kusebenza kunye nani ngokunyaniseka ukuze nize nesicwangciso sentlawulo esifanelekileyo de kufike ixesha lokubuyela kwemali. Xoxa negqwetha elingabinamali ukuba ufumanise ukuba ukufayilisha ngenxa yokubhanga kuya kuyimisa inkqubo yokuchongwa kwangaphambili kwaye ukuba iya kukusebenzela.
Isenzo eLieu -Ukusebenzisa eli cebo, umnini-khaya, ojamelene nokuvezwa, utyikitya itayitile yekhaya ubuyela ebhankini. Oku kwenziwa ngokuzithandela. Isigqibo esenziwa eLieu sinefuthe elifanayo nelo lokuxelwa kwangaphambili. Ababolekisi abazimisele kakhulu ukubuyisa ikhaya ngetayitile endaweni yokuba bebonakalisiwe. Umbolekisi uya kuvumela inkqubo yokuboniswa kwangaphambili ukuba iqhubeke ukuze aqiniseke ukuba umbolekisi akenzi zityholo zobuhlwempu.
Unokufuna ukuqwalasela ukhetho lokuqeshisa ukuba ufuna ukuyeka ikhaya lakho ukuba liboniswe ngaphambili. Oku kuvumela umnini mzi ukuba ajongane nembonakalo yabo ukuba bacenge umbolekisi wabo ukuba aguqule imali-mboleko ngokuvumela omnye umthengi ukuba athathe imboleko-mali. Ngokuqinisekileyo umbolekisi uya kuhlola iimfaneleko zomthengi omtsha, kodwa olu khetho yimeko yokuphumelela kuwo onke amaqela.
Xoxa ngeenketho zakho kunye igqwetha lokuxelwa kwangaphambili uze ukhethe eyona ibonakala ilungile kwimeko yakho.
Pingback: Ndisilele kwi-Case yaseNew Jersey yokuTyhilwa. Ngoku kuthweni? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga